Football Khabar » गोल्डेन बुट दौडमा लेवान्डोस्की धेरै अघि : कसको कति गोल ?
जारी सिजन २०२०–२१ अन्तर्गत युरोपियन टप–५ लिग फुटबलको सर्वाधिक गोलमा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखका रोवर्ट लेवान्डोस्कीले फराकिलो अग्रता बनाएका छन् । हालकै ताजा स्थितिमा उनी यसपटक युरोपियन गोल्डेन बुटको दौडमा धेरै नै अघि पुगिसकेका छन् । गत सिजन उत्कृष्ट लयमा बिताएका ३२ वर्षीय पोलिस फरवार्ड यस सिजन पनि उस्तै लयमा खेलिरहेका छन् । र, प्रशस्तै गोल गरिरहेका छन् ।
युरोपका शीर्ष लिगमा अहिले लेवान्डोस्की सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी हुन् । उनले अन्य लिगका सर्वाधिक गोलकर्तालाई निकै पछि छाडेका छन् । हालसम्म बुन्डेसलिगामा उनले मात्रै १८ खेल खेल्दै कूल २४ गोल गरेका छन् । र, हालसम्म टप लिगमा २० वा सोभन्दा बढी गोल गर्ने उनी एक मात्रै खेलाडी हुन् । उनले थोरै खेलबाटै धेरै गोल गरेर आफूलाई गोल्डेन बुट दौडमा निकै अघि पुराएका छन् ।
हालको अवस्थामा लेवान्डोस्कीलाई इटालियन क्लब युभेन्टसका ३६ वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पछ्याइरहेका छन् । रोनाल्डो लिगका पछिल्ला ४ खेलमा लगातार गोलविहीन रहे पनि उनी सिरी ए लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । र, ताजा अवस्थामा युरोपमा लेवान्डोस्कीपछि दोस्रो सर्वाधिक गोलकर्ता रोनाल्डो हुन् । तर, गोल्डेन बुट दौडमा रोनाल्डोले लेवान्डोस्कीलाई पछ्याउन भने सजिलो छैन ।
किनभने, हालकै अवस्थामा लेवान्डोस्की रोनाल्डोभन्दा ९ गोलले अघि छन् । केही साताअघिसम्म रोनाल्डो र लेवान्डोस्कीबीच मात्रै ३ गोलको अन्तर थियो । तर, पछिल्ला खेलमा रोनाल्डो गोलविहीन बन्दा लेवान्डोस्कीले गोलअन्तर बढाएका हुन् । यस्तो छ ताजा सूची–
बुन्डेसलिगा – रोवर्ट लेवान्डोस्की – २४ गोल (१८ खेल)
सिरी ए – क्रिस्टियानो रोनाल्डो – १५ गोल (१६ खेल)
प्रिमियर लिग – मोहमद सालाह – १३ गोल (१९ खेल)
ला लिगा – लुइस स्वारेज – १४ गोल (१६ खेल)
ला लिगा – युसेफ इन नेश्री – १२ गोल (२० खेल)
लिग वान – केलियन एमबाप्पे – १४ गोल (१७ खेल)
प्रकाशित मिति १८ माघ २०७७, आईतवार १७:४२
कोरोनामुक्त हुँदै फर्किए फर्किए : तर के सिजन फर्काउन सक्लान् ?
सेमिफाइनलमा हेभिवेट भिडन्त : यस्तो हुनेछ इन्टर र युभेन्टसको प्लेइङ–११
ला लिगाको उपाधि होडबारे बोले स्वारेज : बार्सिलोनालाई यस्तो सन्देश
‘मेस्सीको गोप्य सम्झौता लिक’ गरेको ‘आरोप लागेका’ पूर्वअध्यक्ष बार्टोमेउ बोले
कोपा इटालिया सेमिफाइनल : आज इन्टर मिलान र युभेन्टस भिड्दै
च्याम्पियन्स लिग आउन लाग्दा बार्सिलोनालाई नेइमारको यस्तो सन्देश
मेस्सी नम्बर १ मा : रोनाल्डो टप–१० मा पनि छैनन् !